Rakhiyeyaasha Labaad Mashiinka Bacriminta Mashiinka Mashiinka iyo Warshad | YiZheng
Ku Mashiinka Mashiinka Bacriminta Mashiinka Labaad waa jiil cusub oo qalab isku dhafan ah oo ay soo saartay shirkaddeena. Badeecadani waa qalab cusub oo isku dhafan oo rumaysan kara hawlgal joogto ah iyo quudin joogto ah iyo soo saaris. Aad ayey caan u tahay geedi socodka isdaba-marinta khadadka badan ee bacriminta budada iyo khadadka wax soo saarka bacriminta granular.
Waa maxay Mashiinka Mashiinka Bacriminta Mashiinka Mashiinka Labaad?
Mashiinka Mashiinka Bacriminta Mashiinka Labaad waa qalab isku dhafan oo hufan, inta dheer taangiga ugu weyn, ayaa ka sii fiicnaanaya saameynta isku dhafka. Qalabka ugu muhiimsan ee ceyriinka ah iyo qalabka kale ee kaabayaasha ah waxaa lagu quudiyaa qalabka isla waqtigaas oo si isku mid ah ayaa loo qasan yahay, ka dibna waxaa loo sii qaadaa qalabka wax lagu raro ee suunka loo maro habka kala soocidda kala soocidda Ku Mashiinka Mashiinka Bacriminta Mashiinka Labaad wuxuu qaataa qaab dhismeedka rotor-ka cusub si uu u burburiyo alaabada waaweyn inta uu walaaqayo, si loo gaaro ujeedka isku-dhafnaan isku mid ah. Mashiinka wuxuu leeyahay qaab dhismeed is haysta, daboolid wanaagsan, muuqaal qurxoon iyo hawlgal ku habboon iyo dayactir.
Waa maxay Mashiinka Bacriminta Shaft Double usheeda dhexe loo isticmaalo?
Waxaa jira laba faasas oo iskumid ah oo iskumid ah oo isku shaandheyn ku wada jirka ugu weyn ee Mashiinka Mashiinka Bacriminta Mashiinka Labaad, iyo dhidibka helical wuxuu ku qalabeysan yahay daab wareegsan oo wareegaya. Mashiinka saxarka ayaa u rogi doona walxaha weheliya wareegga wareegga iyo wareegga xagal gaar ah, si ay maaddadu si dhakhso leh oo siman isugu qasan u noqoto. Mashiinka quudinta ee mashiinka waxaa lagu siiyaa balastar aan boodh lahayn, taasoo si wax ku ool ah uga hortagi karta jiilka ceeryaanta biyaha. Meesha lagala xiriiro inta u dhexeysa gunta saxarka ayaa si buuxda xiriir ula leh maaddada si isku dhafku uga dhigo mid isku mid ah. KuMashiinka Mashiinka Bacriminta Mashiinka Labaad waxay si siman u qoyi kartaa walxaha budada ah markii la walaaqayo. Qiyaasta maaddada uumiga ah ma aha dambas qallalan ama biyo qulqulaya. Isku-darka qulqulaya ee huurka ayaa aasaas u ah geeddi-socodka gaadiidka iyo soo-ururinta soo socota.
Codsiga Mashiinka Mashiinka Bacriminta Mashiinka Labaad
Ku Mashiinka Mashiinka Bacriminta Mashiinka Labaad waa ku habboon yahay in la isku daro in ka badan laba nooc oo bacrimin ah, premixes wax lagu daro, quudinta isku dhafan, quudin isku urursan, feed premix additive, iwm.
Faa'iidooyinka Mashiinka Mashiinka Bacriminta Mashiinka Double Shaft
(1) Waxqabad aad u deggan.
(2) Awood walaac badan.
(3) Soo-saar joogto ah.
(4) Qaylada hoose.
(5) Si fudud loogu rakibo loona dayactiro.
Double Shaft Bacriminta fiicni Mashiinka Video Display
Xulka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Double
Hore: Caws & Burburka Xaabada
Xiga: Mashiinka Bacriminta Horizontal